'विवादित'लाई मेडिकल काउन्सिल अध्यक्ष | Nagarik News - Nepal Republic Media
'विवादित'लाई मेडिकल काउन्सिल अध्यक्ष
२७ कार्तिक २०७१ १० मिनेट पाठ
काठमाडौं- निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा लगानी गरेको भनी कारबाहीमा परेका र किर्ते अभियोग प्रमाणित भएका चिकित्सक डा. जागेश्वर गौतमलाई सरकारले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ।
नयाँ मेडिकल कलेजलाई 'चोर बाटो'बाट सम्बन्धन दिन अनेक प्रपञ्च भइरहेको र मेडिकल कलेजको सिट संख्या तोक्ने विषय विवादित रहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार डा. गौतमलाई काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो। उनलाई तीन साताअघि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रसूति गृहको निर्देशक बनाएको थियो।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ५९, १(क) अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले कुनै पनि कम्पनी स्थापना, दर्ता वा सञ्चालनमा भाग लिन, स्वास्थ्य क्लिनिक वा निजी अस्पताल खोल्न तथा सञ्चालन गर्न पाइँदैन। सतर्कता केन्द्रको छानबिनबाट डा. गौतमले चितवन मेडिकल कलेज र ओम अस्पतालमा ठूलो मात्रामा सेयर लगानी गरेको भेटिएको थियो। उनले गोरखा जिल्ला अस्पतालमा १० औं तहमा कार्यरत रहँदा उक्त लगानी गरेका थिए।
'विवादित मान्छेलाई मेडिकल काउन्सिलजस्तो गरिमामय संस्थाको अध्यक्ष बनाउनु सरासर गल्ती हो,' पूर्व स्वास्थ्यसचिव डा. प्रवीण मिश्रले बुधबार नागरिकसँग भने, 'उनलाई मैले नै सतर्कता केन्द्रको सिफारिसका आधारमा ग्रेड घटुवालगायत कारबाही गरेको हुँ, यस्तो मान्छेलाई मेडिकल काउन्सिलजस्तो संस्थामा ल्याउन मिल्दैन।'
नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गौतमले ओम अस्पतालमा लगानी भएको इन्कार गर्दै चितवन मेडिकलको सेयर विवाद भने कोट्ट्याउन नचाहने बताए। 'त्यो कुरा म अहिले कोट्ट्याउन चाहन्न, चितवन मेडिकल कलेजमा मैले धेरै पसिना बगाएँ,' उनले बुधबार राति नागरिकसँग भने, 'मलाई षड्यन्त्रपूर्वक विवादमा तानिएको हो।'
त्यही विवादका कारण कारबाही गरिएकोबारे सोध्दा उनले भने, 'कारबाही गर्ने हल्ला सुनेको हो, तर त्यो मकहाँ कहिल्यै आइपुगेन।'
एकैचोटि प्रसूति र मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी पद सम्हाल्न अप्ठ्यारो हुँदैन भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले 'कानुनी रूपमा दुवैतिर जागिर खान मिल्ने' प्रस्टीकरण दिए। 'व्यावहारिक रूपमा सक्छु कि सक्दिन भन्ने साथीभाइसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्छु,' उनले भने।
एमबिबिएस सिटसंख्या लगायत विषयमा मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलबीच लामो समय चलेको विवादपछि काउन्सिलका अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेलले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए। लगत्तै स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले रिक्त पदमा डा. गौतमको नियुक्ति गरेका हुन्। मन्त्रालयले 'स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण नदिएपछि राजीनामा गरेको' डा. गजुरेलको भनाइ छ।
'काउन्सिलको अध्यक्ष बन्न कम्तीमा तीन/चार वर्ष सदस्य भएर काम गरिसकेको, पूर्ण समय दिनसक्ने, इमानदार, बात नलागेको, प्राज्ञिक रूपमा पनि प्राध्यापक स्तरको मान्छे हुनुपर्छ, डा. गौतमले यी योग्यता पूरा गरेका छैनन्,' पूर्व स्वास्थ्यसचिव डा. मिश्रले भने, 'उनलाई अध्यक्ष बनाए इमानदार चिकित्सकको यो संस्थाप्रति आस्था कहाँ बाँकी रहन्छ?'
मेडिकल काउन्सिल आफैंमा बृहत जिम्मेवारी भएको संस्था भएकाले प्रसूति गृहजस्तो ठूलो सरकारी अस्पतालको निर्देशक भएको मान्छे ल्याउँदा दुवैतिरको काम प्रभावित हुने पनि डा. मिश्रले उल्लेख गरे।
स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले भने आफू आएपछि डा. गौतमलाई कारबाही भएको थाहा नपाएको बताए। 'म आएपछि सजाय पाएको थाहा छैन,' उनले बुधबार नागरिकसँग भने, 'हामीले ऐनले तोकेअनुसार योग्यता हेरेरै नियुक्ति दिएका हौं।' प्रसूति गृह र काउन्सिल दुवैतिर काम गर्दा समस्या आइपरे त्यसबारे मन्त्रालयले सोच्ने उनले बताए।
डा. गौतमले काउन्सिल अध्यक्षका रूपमा चिकित्सकको निगरानी बढाउने र आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन्। 'मेडिकल शिक्षामा समस्या छ, मेरो लक्ष्य मेडिकल कलेजलाई खुम्च्याएर विद्यार्थीलाई बाहिर जान बाध्य बनाउने होइन, बेपरवाह कलेज थप्ने पनि होइन,' उनले भने।
मेडिकल कलेजहरूले प्रत्येक वर्ष भर्ना लिने एमबिबिएस/बिडिएसतर्फको सिट विश्वविद्यालयको सिफारिसका आधारमा काउन्सिलले तोक्ने व्यवस्था छ। यस वर्ष भने काउन्सिलले तोकेको सिटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। काउन्सिलले तोकेको सिट 'अवैज्ञानिक' भएको मन्त्रालयको आरोप छ। डा. गौतम नै सदस्य रहेको समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले 'सिट निर्धारण गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न' काउन्सिललाई निर्देशन दिएको हो।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७१ ०१:४८ बिहीबार